Suuq geynta Waxyaabaha Yaryar ee Ganacsi ee Macaamiisha | Martech Zone
Boqolkiiba 70 macaamiisha ayaa doorbidaya ka hel macluumaad ku saabsan shirkad waxyaabaha ay ka kooban tahay halkii aad uga mari lahayd xayeysiinta. Boqolkiiba 77 ganacsiyada yar-yar ayaa maal-galiya hababka suuq-geynta waxyaabaha ku jira si loogu beddelo booqdayaasha khadka tooska ah macaamiisha. Qeybta hoose waa tan:
Guji ka kooban Mawduucyada La Wadaagaa waxay shan jeer ka badan yihiin natiijada iibsiga!
Ka baxsan kharashka waqtiga, suuq-geynta waxyaabaha ma ahan qaab qaali ah oo lagu kobciyo ganacsigaaga. Aqlabiyadda ballaaran ee ganacsiyada yaryar waxay leeyihiin nidaam maareyn maareyn oo adag oo soconaya, awoodna u siinaya inay soo saaraan oo wax ku wadaagaan khadka tooska ah. Laakiin miyey samaynayaan wax kasta oo ay noqon karaan?
Waa maxay Hababka Suuqgeynta Macluumaadka ay ugu Shaqeeyaan Ganacsiyada Yaryar
Email Marketing - 80% ganacsiyada yaryar ayaa u rogaya booqdayaasha internetka macaamiisha isticmaalaya joornaalada elektaroonigga ah.
Articles - 78% ganacsiyada yaryar ayaa u rogaya booqdayaasha internetka macaamiisha iyagoo ku daabacaya maqaallada internetka.
Wadaagista Sawirka - 75% ganacsiyada yaryar ayaa u rogaya booqdayaasha khadka tooska ah macaamiisha iyagoo kula wadaagaya sawirrada iyo sawirrada khadka tooska ah.
videos - 74% ganacsiyada yaryar ayaa u rogaya booqdayaasha khadka tooska ah macaamiisha iyagoo fiidiyowyo ku daabacaya internetka.
Xogtaan 4-ta ah ee ugu sareysa waa sida saxda ah sababta aan u horumarinay CircuPress sida a warside plugin for WordPress. Waxaan ogaanay in ganacsiyo badan oo yaryar ay ka shaqeynayaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin, laakiin ma aysan laheyn nidaam emayl oo si toos ah ugu qeybinkara waxyaabaha ay ku qoran yihiin macaamiisha iyagoon waqti-qaadin ama tikniyoolajiyad adag oo isku-dhafka iyo qoraalka ah.
Xogtan waxaa soo saaray SCORE. Sannad kasta, SCORE waxay siisaa la-talin ganacsi yar-yar, aqoon-isweydaarsiyo iyo waxbarasho in ka badan 375,000 ganacsiyo yaryar oo cusub oo koraya. In ka badan 11,000 oo khubaro ganacsi ayaa tabaruc ahaan tababarenimo ah in ka badan 320 cutub oo u adeegaya bulshooyinka maxalliga ah waxbarashada ganacsadaha.
Tags: 2015b2chababka ugu wanaagsancircupressContent SuuqEmail Marketingscoreganacsiga yaryar